Cycloastragenol powder (78574-94-4) - Shangke Chemical
Cycloastragenol dia zavamiaina be menaka miady antitra amin'ny fahanterana amin'ny tsena.
Horonantsary Cycloastragenol (78574-94-4) horonan-tsary
Cycloastragenol vovoka Specifications
Product Name Cybloastragenol vovoka
Anarana simika N / A
CAS Number 78574-94-4
molekiolan'ny Formula C30H50O5
molekiolan'ny Wvalo 490.7 g / mol
Tavy N / A
Solubility DMSO: 10 mg / mL, mazava
Application Cycloastragenol dia mahery setra telomerase. Ary koa, azo antoka fa mifandray amin'ny tsy fahanterana amin'ny fanafody sinoa.
Cycloastragenol dia zavamiaina be menaka miady antitra amin'ny fahanterana amin'ny tsena. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny formula skincare sy tarehy kosmetika. Ny Cycloastragenol voalohany dia namidy tamin'ny famatsiana sakafo ara-tsakafo tany Etazonia tamin'ny taona 2007 noho ny anarana hoe TA-65, izay no antony nanaovan'ny TA 65 na TA65 ny anarana fahita indrindra amin'ny cycloastragenol.
Inona ny atao hoe Cycloastragenol?
Ny Cycloastragenol dia molekiola iray nalaina tamin'ilay bozaka Astragalus membranaceus. Ny ahitra Astragalus dia nampiasaina tamin'ny fanafody sinoa nandritra ny taonjato maro. Nilaza ny sinoa fa afaka manome fotoana maharitra ny Astragalus ary efa nampiasaina izy io mba hikarakarana ny havizanana, ny alika, ny hatsiaka, ny aretim-po ary ny diabeta.
Ny cycloastragenol dia iray amin'ireo mazoto mavitrika ao amin'ny Astragalus. Ny Cycloastragenol dia manana endrika simika mitovy amin'ilay molekôma Astragaloside IV, saingy kely kokoa izy io ary somary azo ampiasaina kokoa, izay manome fatra ambany kokoa. Izany dia efa ampiasaina ho toy immunostimulant noho ny fahafahany mampitombo ny fandrobiana T lymphocyte. Na izany aza, ny fananany mampiavaka ny antitra dia mitombo ny fahalianana amin'ny fiarahamonina siantifika.
Ny Cycloastragenol dia mandrisika ny fanamboarana ny simba amin'ny ADN amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny telomerase, ny sela nucleoprotein izay mihetsiketsika sy fivoaran'ny ADN telomerika. Ny telomeres dia vita amin'ny filam-bary manjavozavo ary hita ao amin'ny tendron'ny chromosom. Ny fitazonana ny fahamarinan-dry zareo dia ahafahan'ny sela hialana amin'ny fihenan-kafatra tampoka ary ny fihanaky tsy voafetra mihoatra ny 'fetra Hayflick' Fohy ny telomeres miaraka amin'ny tsingerin'ny fizarazaran'ny sela, na rehefa tratran'ny adin-tsaina miatrika oxidative. Hatramin'izao, mekanika tsy azo ihodivirana izao amin'ny fahanterana.
Ny fiasan'ny hetsika Cycloastragenol
Ny fandinihana maro dia nampiseho fa ny fanafohezana miadana ny telômera dia mifandray akaiky amin'ny aretina marobe (aretina aretim-po, areti-mifindra, sns) ary efa voambara mialoha koa ny fahafatesan'ny fe-potoana amin'ny antitra. Fohy ny telomeres miaraka amin'ny tsingerin'ny fizarazaran'ny sela, na rehefa tratran'ny adin-tsaina miatrika oxidative. Hatramin'izao, mekanika tsy azo ihodivirana izao amin'ny fahanterana.
Telomerase dia anzima nucleoprotein izay manelingelina ny fitrandrahana sy fitomboan'ny DNA telomerika ary mandrisika ny fanamboarana ny fahasimban'ny ADN.
Ny Cycloastragenol dia mamelona sy mandrisika io angovo io, noho izany dia mampiato ny fanafoanana ny telomeres ary mampitombo isa koa izy ireo. Amin'izany fomba izany dia mamela ny fanitarana ny telomeres izy ary vokatr'izany dia manitatra ny androm-piainan'ny sela.
Noho ny lanjan'ny molekiola ambany dia mora, mandalo mora foana amin'ny rindrin'ny tsina ny Cycloastragenol. Ny assimilie optima dia mamela ny fahombiazan'ny ambony kokoa, na dia amin'ny fatra iray ambany aza. Ny famatsiana isan'andro isan'andro, na amin'ny fitambaran-javatra na mifandimby, astragaloside IV, dia hanampy amin'ny fitazomana ny fahanterana ary hanitatra ny faharetan'ny fiainana.
Ny membranaceus Astragalus dia anisan'ireo zava-maniry fototra indrindra ao amin'ny tantara nentim-paharazana Shinoa amin'ny fanafody voajanahary mba hitsaboana ny harerahana, ny aretina, ny fery, ny homamiadana, ny tazo, ny setroka, ny halavan'ny maro hafa. Na izany aza, ny tombontsoa lehibe amin'ny vovobon'ny cycloastragenol dia toy ny vokatra manohitra ny fahanterana sy ny hery fiarovana.
Cycloastragenol ary ny fanohanana ny fiarovana
Ny cycloastragenol dia azo ampiasaina hiarovana ny hery fanefitra, ny otrikaretina bakteria, ary ny anti-wlamida, mba hialana amin'ny hatsiaka mahazatra sy ny aretim-pisefoana ambony. Nampiasaina ho fampitomboana ny hery fiarovana noho izy ity satria afaka manabe ny fihanaky ny T lymphocyte. Na izany aza, ny zavatra ara-tsiansa momba ny siantifika dia liana bebe kokoa hatrany dia ny fanoherany tsara. Cycloastragenol dia mandrisika ny ADN hanamboatra simba amin'ny alàlan'ny fametrahana telomerase ary mamela ny proteine ​​nokleary hameno ny fihanaky ny ADN telomere.
Cycloastragenol ary manohitra ny fahanterana
Ny anti-antitra dia tombotsoa indrindra amin'ny cycloastragenol. Ny Cycloastragenol dia tsy fanemotra ny fahanteran'olombelona fotsiny, fa ankoatr'izay dia nanatsara ny tsy fahampiana, ny fanapoizinana ny poizina, miaro ny sela kardia, indrindra avy amin'ny hydragaloside (Astragaloside Ⅳ).
Tombony Cycloastragenol hafa
Ny vovony cycloastragenol dia misy fiantraikany amin'ny fanamaivanana ny fihenjanana sy ny fiarovana ny vatana amin'ny fihenan-tsaina samihafa, ao anatin'izany ny adin-tsaina, ara-tsaina na ara-pihetseham-po;
ny vovony cycloastragenol dia misy antioxidants, izay miaro sela manohitra fahasimbana ateraky ny radical afaka;
Ny vovony cycloastragenol dia misy fiantraikany amin'ny fampihenana ny tosidra, ny fitsaboana ny diabeta ary ny fiarovana ny aty.
Cycloastragenol vokarin'ny vovoka
Hatramin'izao dia tsy misy tatitra na famerenana amin'ny fiantraikany ratsy na contraindication maka ny fanampin-tsakafo cycloastragenol.
Cycloastragenol fatra fanampiny
Cycloastragenol dia vaovao ary tsy be dia be ny marika famatsiana eny an-tsena, ary tsy misy fatrany azo ampiasaina. Araka ny zavatra iainantsika dia miovaova ny tanjona misy, samy hafa taona. Mazava ho azy fa ny cycloastragenol dia mahery vaika kokoa noho ny Astragaloside IV izay fatra natokana ho 50mg isan'andro. Raha ho an'ny cycloastragenol, ny fatra amin'ny 10mg ka hatramin'ny 50mg dia tsy maninona daholo. Ny antitra dia mila maka mihoatra ny olon-dehibe antitra. Ny sasany dia manome soso-kevitra manomboka amin'ny 5mg isan'andro, ary avy eo ampio tsikelikely. Satria ny cycloastragenol dia voajanahary voajanahary, dia mety maharitra ny fotoana hahitana ny vokatr'izany, enim-bolana eo ho eo.
Cycloastragenol dia notononin'ny sasany ho toy ny anti-fahagagana manohitra fahanterana. Ny fandinihana tany am-boalohany dia toa mampanantena, mampiseho izany fa mahay mampitombo ny halavan'ny telomere, na izany aza mbola misy ny tsy fahampian'ny fikarohana voarindra momba ny kalitao. Ankoatr'izay, misy ny ahiahy hoe ny fahazoana ny Cycloastragenol dia mety hampitombo ny voan'ny kansera sasany. Na izany aza, ny fikarohana fikarohana dia tsy nahavita nametraka risika mety homamiadana mifandray amin'ny fampiasana ny Cycloastragenol.
Ny Cycloastragenol dia toa tamban-java-maniry antenaza amin'ny fahanterana. Na dia tsy voaporofo aza ny mampiakatra ny aina, dia naseho hampihena ny biomarkers mifandraika amin'ny taona maro. Ankoatr'izay dia naseho izy hampihenana ny mariky ny fahanterana toy ny tsipika fatorana sy ny kapetaka. Mety hampihena ny loza mety hitranga amin'ny areti-mandringana toa ny Alzheimer's, Parkinson's, retinopathies ary cataract.
Cycloastragenol fampiasana vovoka sy fampiharana
Ny Cycloastragenol dia ampiasaina amin'ny fitsaboana, fifehezana, fisorohana ary fanatsarana ireto aretina sy fepetra ireto ary:
Ny cycloastragenol dia mety ampiasaina ihany koa amin'ny tanjona tsy voatanisa eto.
Ny vovobony cycloastragenol vovoka dia ampiasaina amin'ny sehatra i lalo:
Ampiharina amin'ny sehatry ny sakafo, dia ampiasaina ho fanampin'ny sakafo;
Ampiharina eo amin'ny sehatry ny vokatra ara-pahasalamana, io singa io dia mahasoa amin'ny vatan'olombelona;
Ampiharina eo amin'ny sehatry ny makiazy, ho toy ny fitaovana manta, dia afaka mampifangaro tarehy voajanahary.
Ny fanoherana ny antitra miteraka cycloastragenol novokarin'ny biotransformation.Chen C, Ni Y, Jiang B, Yan S, Xu B, Fan B, Huang H, Chen G.Nat Prod Res. 2019 Sep 9: 1-6. doi: 1080 / 14786419.2019.1662011.
Cycloastragenol: kandidà vaovaom-panentanana mampientam-po ho an'ny aretina mifandraika amin'ny taona.Yu Y et al. Exp Ther Med. (2018) Ny antitra mihoa-pampana cycloastragenol novokarin'ny biotransformation. Chen C, Ni Y, Jiang B, Yan S, Xu B, Fan B, Huang H, Chen G. Nat Prod Res. 2019 Sep 9: 1-6. doi: 10.1080 / 14786419.2019.1662011
Ny Cycloastragenol dia mety hanadino ny fampivoarana STAT3 ary mampiroborobo ny apoptosis voan'ny paclitaxel amin'ny alàlan'ny sela homamiadana .Hwang ST, Kim C, Lee JH, Chinnathambi A, Alharbi SA, Shair OHM, Sethi G, Ahn KS. 2019 Jun
Ny Astragaloside VI sy cycloastragenol-6-O-beta-D-glucoside dia mampiroborobo ny fanasitranana amin'ny ratra amin'ny vitro sy amin'ny vivo.Lee SY et al. Phytomedicine. (2018)
Rohamena 6-paradol (27113-22-0)